प्रकाश सपूतले पठाए दाइलाई अन्तिम एस्तो मेसेज
Thursday, October 29For your kind information
June 11, 2019 June 11, 2019 by साहारा संदेश
‘दाइ, मलाई बाँच्न पुग्यो, म सुसाइड गर्दैछु, यो मेरो अन्तिम म्यासेज तपाईलाई।’ दुई वर्षअघि मध्यरातमा अहिलेका चल्तीका गायक सर्जक प्रकाश सपुतले पठाएको म्यासेजले मेरो निद्रा एकाएक हराम गर्यो। रातको १ बजिसकेको थियो। अक्सर रातिको फोन र म्यासेज दुवै खतरापूर्ण लाग्छ र फोन पनि उठाउँदिन र म्यासेज पनि रेस्पोन्स गर्दिनँ।
तर, यो म्यासेजले मेरो मन मथिंलमा यति ठूलो हलचल ल्याइदियो कि जवाफ नदिइरहन, फोन नगरिरहन सकिनँ। सान्त्वना मिश्रति म्यासेज गरें, जवाफ आएन। दर्जनाैं पटक फोन गरे, फोन उठेन। लाग्यो- उनले भनेझै भर्खरै आएको म्यासेज अन्तिम नै भएको हो त ? अब उनको मोवाइलबाट मलाई कहिल्यै म्यासेज, फोन आउँदैन? म आत्तिए।
काँपे पनि। लाग्यो उसलाई काठमाण्डौंको स्वार्थ, आडम्बर र निराशाले जित्यो र अप्रिय निर्णय लिने कठोर बिन्दुमा पुग्यो। र, पनि मैले निराशामा उत्साह, ऊर्जा र प्रेरणा मिल्ने केही म्यासेज पठाइरहे। भोलिपल्ट अरु निकटसँग बुझें, त्यसदिन उनी असाध्यै तनाबमा रहेछन। मलाई अप्ठ्यारो, कठीन क्षणमा उनले निकट सम्झिन्छन्, सम्झिएरै म्यासेज गरे। पछि सम्पर्क हुँदा उनी उस्तै तनावमा थिए।
आज एक असल नियत, पृथक सिर्जना र शैलीमा काम गर्ने सर्जकका नाममा केही लेख्नैपर्ने महुशुस गरें। यो प्रसंग किन उल्लेख गरिरहेको छु भन्दा प्रकाश सपुतको ‘गलबन्दी’ गीत ८० लाखबाट उकालो लाग्दै गर्दा एकाएक भाका मिलेको विषय भाइरल गराइयो। यस्तो प्रयास ‘बोल माया’ र ‘ब्याटल’दुवैमा भयो। यद्यपि ती प्रयत्न आफैं विफल भए।
अहिले फेरि प्रिय गायक शम्भु राईको देउसी भैलोको चुड्कासँग पुरै मिलेको भनेर जर्बजस्त बिवादित बनाउने प्रयास भइरहेको छ। त्यो शुरुवातमा झट्ट सुन्दा उस्तै लाग्छ। तर, गीतको मध्य, अन्त्य र पुनः उठानमा पृथक छ। यो उनले राईको गीत सुनेरै खराब नियतले बनाए भन्ने त मलाई लाग्दैन । किनकि उनले यसअघि पनि राम्रा सिर्जनामार्फत आफूलाई नेपाली समाजमा कम उमेरमै क्षमतावान गायक, सर्जक र निर्देशकको रुपमा प्रमाणित गरिसकेका छन। लोक गीत कहिल्यै नसुन्नेहरुलाई पनि सुन्ने बनाएका छन।
भाका मिल्यो भन्ने जर्बजस्त लेखिएका समाचार र स्टाटसका प्रतिक्रिया पढ्दा र हेर्दा पनि एकाधबाहेक सपुतको सिर्जनाकै पक्षमा देखिन्छ। यसको यथार्थ विद्वत संगीतज्ञहरुले छुट्याउनुहोला। सच्चिनुपर्ने र महुशुस गर्नुपर्ने ठाउँ हो भने गायक सपुत पनि त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ। यद्यपि संगीत बजार र त्यसमा पनि लोक लय कतै न कतै मिले जस्तो आभाष भइरहन्छ।
यसको अर्थ नियतवस पुराना गित या सिर्जनाको निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने होइन। यस्ता विषयमा दुवै पक्षका वीचमा प्रष्टता, बुझाइ र सिकाई जरुर छ। लोक दोहोरी प्रतिष्ठानलगायत संगीत सम्वद्ध धेरै संघ संस्था छन। जसले यस्ता विषयमा समन्वय, सरलीकरण र नयाँ पुस्तालाई उत्साहित गर्न भुमिका खेल्नुपर्छ । नियतवस गलत गरेको भए आत्मआलोचित महसुस गराउने हैसियत राख्नुपर्छ।
न कि अदृश्य रुपमा सामान्य विषयलाई अझ बढी विवादित बनाउने। राम्रा सर्जक र सिर्जना गर्ने सामथ्र्य भएकाहरुलाई निरुत्साहित गर्ने । कोही राम्रो भयो या गायो कि आफ्नो बजारको हिसाव किताव गरेर टीका टिप्पणी गर्ने। यस्तो विषयमा कला सम्वद्ध सघं संस्था र सर्जक वीच गम्भिरता, संवेदनशिलता, प्रष्ट संवाद र बहस आवश्यक छ।
गायक सपुत भूँइबाट उठेका सर्जक हुन। उनलाई पर्दा पछाडिका अपवित्र गतिविधि र दृश्य मन पर्दैन। स्वभावका हिसावले छिटो बढी भावुक र निराश हुन्छन। खराब नियतले काम नगर्ने तर असल उद्देश्य र मनसायले काम गर्दा गर्दै पनि नियोजित रुपमा गर्ने प्रहारको उनी प्रतिकार गर्दैनन। त्यस्ता विषयमा मौन नै बस्न चाहन्छन। सामना गर्ने परिस्थिति आए पनि निकै शालिनतापूर्वक प्रयास गर्छन।
जसका कारण कतिपय बिद्धान, अग्रज, समकालिन प्रतिस्पर्धी र नयाँ पुस्ताका युवा सर्जक शुभेच्छुकले यही स्वाभावलाई कमजोरी ठान्छन् र हेयको दृष्टि राखेर अपमानवोध पनि गराउँछन। यो उनले गाउँदेखि बागलुङ बजार, बागलुङदेखि काठमाण्डौंसम्म पुग्दा सैयौं अनुभूति सँगालेका पनि छन। म जन्म गाउँ र बागलुङ बजारको बसाइ र उनका सबै गतिविधिलाई पछ्याइरहने
शुभेच्छुकका हिसावले यति चाहिँ निसन्देह भन्न सक्छु कि प्रकाश सपुत जहाँ जे गर्छन्, त्यो इमान्दारिपूर्वक, सकेसम्म अलि पृथक हिसावले काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन।
यसको पछिल्लो उदाहरण बोल माया, ब्याटल १ र २ र अहिलेको गलबन्दी प्रष्ट छ। तर, कतिपय मानिसलाई यसरी राम्रा प्रयास गरेको, राम्रा सिर्जना गरेको, राम्रा काम गरेको देख्दा, सुन्दा र हेर्दा पनि टाउको दुख्छ।
तिमीले इमान्दार प्रयास गर्दा कसैको टाउको दुख्छ भने तिमी निराश नबन। टाउको दुख्नु तिम्रो समस्या होइन, त्यो व्यक्तिको समस्या हो। त्यसको उपचार गर्छ या कुण्ठा पालेर दीर्घरोगी बन्छ, त्यो उसैको जिम्मा छोडिदेऊ।
तिमी आफ्नै लयमा छौ, जुन लयमा अब हजारले होइन, लाखले होइन, करोडले कसरी पाइला चाल्छौ, कसरी हिड्छौ, कसरी सोच्छौ भनेर परीक्षा लिने परिचय र प्रतिष्ठा आर्जन गरेका छौ। यो तिम्रो ठूलो सम्पति हो।
जसलाई उपयोग गर्ने र जोगाइ राख्ने चुनौति र अवसर दुवै तिमीसँग छ। अहिले समाज र सामाजिक सञ्जालमा नकरात्मक सोच व्याप्त छ। भाइरलको नयाँ जमाना आएजस्तो दृश्य देखिन्छ। फेरि पनि दोहोर्याएर भन्छु – ‘मान्छेले ढुंगा त्यहाँ हान्छ, जुन रुखमा फल लागेको छ।’ तिम्रो उमेरभन्दा अग्लो उचाई तिमीले प्राप्त गरिरहँदा सफलता मात्र तिमीसँग होइन, चुनौतिहरु पनि पछि लागेर आएका छन। एक सेलिब्रेटीका हिसाबले कति आलोचनाहरुलाई तनावको बिषय नबनाई पचाउन पनि सक्नुपर्छ।
Prevसहि उत्तर दिनुहोस ५०० को रिचार्ज जित्नुहोस। सहि उत्तर भित्र गएर दिनुपर्ने छ।
Nextआफ्नै छोरिलाई बलात्कार गर्न खोज्ने सचिवलाई दिइयो येस्तो सजाय